दलित हुँदैमा मारिनुपर्ने? रामायणमा भगवान रामले तल्लो जातकी माताको हातको जुठो फल खाएर आफ्नो भोक मेटाए। भगवानले जातपात उँचनिच केही भनेको छैन। हामी सबै श्रृष्टिकै परिणति हौं। तर, विभेदको आडम्बर किन? आदिकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदनमा ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ भनेका छन्। सुरशेकुमार परियार